Nkọwa ihe omuma esi ewepu data site na HTML peeji nke n'ime faịlụ PDF
N'isiokwu a, anyị ga-ejide gị site n'usoro nke wepu data site na peeji nke HTML gị ma kụziere otu esi eji ozi ahụ wulite faịlụ PDF. Nzọụkwụ mbụ bụ ịchọpụta ngwaọrụ na asụsụ nke ị ga-eji maka ọrụ ahụ. N'okwu a, ị ga-eji mmachi nke Perl.
Okpokoro a yiri Ruby na Rails ọ bụ ezie na o nwere atụmatụ ndị ọzọ nwere ike karịa ihe ị na-atụ anya ya. Anyị agaghị eji nke a kpuchie mkpokọta weebụ ma wepu ozi sitere na peeji nke dị ugbu a - e vape starter kits cigarettes. Obi ọjọọ nwere atụmatụ ndị magburu onwe ha iji weghachite ma hazie ibe HTML. Ọ ga-ewe gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 sekọnd iji wụnye ngwa a na akụrụngwa gị.
Nkeji Otu: Ọ dị mkpa ịghọta usoro ị chọrọ iji mee ihe mgbe ị na-ede akwụkwọ. Na nke mbụ, a na-atụ anya na ị ga-ede obere edemede ad-hoc mgbe ị ghọtara ihe ịchọrọ ime ma nwee nghọta zuru oke maka mgbaru ọsọ ikpeazụ gị. Rịba ama na koodu ederede a ga-edozi anya n'enweghị usoro ma ọ bụ usoro ntanetị.
Nkeji nke abụọ: Ugbu a ị nwere nghọta zuru oke banyere ntụziaka ịchọrọ iji na ụlọ akwụkwọ ọhụụ iji. Ọ bụ oge 'kewaa ma na-achị'! Ọ bụrụ na ị chịkọtara Koodu nke ziri ezi na-eme otu ihe ahụ, debe ha n'ime ihe ndị dị n'okpuru. Uru nke ntinye ihe ntanetị bụ na ị nwere ike ime mgbanwe dị iche na-enweghị mmetụta nke ndị ọzọ. Ọ ga-enyekwa nkọwa ka mma.
Nkeji atọ: Nke a na-enye gị ohere ịmepụta koodu gị. Ị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ na-emepụta mkpụrụ ego iberibe mgbe ị natasịrị ahụmahụ dị mkpa. Ugbu a, ịnwere ike ịgafe site na ntinye usoro iji mee ka ọ bụrụ na ị na-eji asụsụ a na-eme ihe. Onye ọ bụla nke na-eji ụdị ọrụ nwere ike ịwepu ngwa iji nchịkọta ma ọ bụ / na 'etiti.' Kedu ihe mere i ji eji usoro a mgbe mmemme? Nke a bụ n'ihi na ịchọrọ "ohere iku ume" karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ ngwa ngwa.
Mgbe nkwupụta, oge eruola ka ị kwaga n'usoro ihe omume ugbu a. Nke a bụ usoro ị ga - achọ iji malite mgbe ị na - emejuputa weebụ weebụ:
Mepụta ndepụta URL nke isiokwu ịchọrọ ịchọta;
Gbanyụọ ndepụta gị ma chọta URL ndị a otu mgbe ọzọ;
Wepụ ọdịnaya gị na mmemme HTML;
Chekwaa nsonaazụ gị na faịlụ HTML;
Gụkọta pdf faịlụ site na faịlụ gị ozugbo ị nwere ha niile njikere;
Ihe niile dị mfe dịka ABC! Naanị nbudata ihe nchọgharị weebụ, ị ga-adị njikere maka ọrụ ahụ.